Askari Soomaali ah oo qof haween ah ku dilay magaalada Minneapolis -
Waxaa maalintii sabtida ahayd ee taariikhdu ahayd 7/15/2017 ay ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis ku toogteen qof haween ah.
Askarigii dilay qofkan haweenka ah ayaa sida la sheegayo noqday Maxamed Nuur oo kamid ah wiilasha Soomaalida ah ee iyagu ku jira ciidanka booliiska magaalada Minneapolis.
Qofka haweenka ah ee toogashadda booliisku ku dileen ayaa la sheegay in ay tahay Justine Damond, jirtana 40 sanno. Justine Damond ayaa iyadu u dhalatay dalka Australia, waxayna magaalada Minneapolis u timid in ay guursato nin isagu deggan magaalada Minneapolis ee gobolka Minneapolis.
Haddaba waxbixin cad lagama hayo sababta keentay in uu Maxamed Nuur toogto ama dillo Justine Damond.
Maxamed Nuur iyo askari kale oo la socday markii uu dilkani dhacay ayaa shaqadii laga fariisiyay, waxaana la sheegay in saraakiisha dambi baarista ay baarayaan sida uu u dhacay falkan. Maxamed Nuur ayaa isagu ku biiray ciidanka booliska magaalada Minneapolis sanadkii 2015-kii.
Dilalka ay geeystaan Askarta Booliiska ah ee iyagu ka shaqeeya magaalooyinka kala duwan ee dalka Mareykanka ayaa sannadahan aad u soo kordhaya.
Wixii akhbaar dheerad ee ku soo kordha arrintan waxaan idiin ku soo gudbineynaa bogga Tusmo Times.